Daty nahaterahana Daty: Ny antony tokony hikarakarana sy ny tokony hatao - Sekoly teknolojia
Tamin'ny fotoana nananganan'ny Kongresy Amerikana an'i S. Res. 337, ny fanapahan-kevitra tsy voafaritra mampitohy ny fanohanana ny fanendrena ny "National Data Privacy Day" dia hita tamin'ny tamin'ny 28 tamin'ny Janoary, tsy dia nisy fotoana be ny nahalalàna ny teny, na dia teo aza ny toe-javatra fotoana fohy.
Na izany aza, izany no daty izay nahatsapako voalohany ny Andro Daty Daty Daty Daty, ary nandritra ny taona maro taorian'ny fizarana ilay volavolan-dalàna dia lasa tomponandraikitra ny fiarovana ny Daty manokana aho ary ankoatra ny fiarovana ny data amin'ny asa.
Ny fanapaha-kevitry ny 28 tamin'ny Janoary dia tsy nampidi-doza. Tamin'io daty io tao amin'ny 1981, ny Filank'i Eoropa dia nanao ny Fifanarahana ho fiarovana ny olona tsirairay mikasika ny fanodinana ny otrik'aretina manokana. Soa ihany, nampiarahina ny anarana ho an'ity fotoana ity izy ireo ary nanamarika ny Convention 108, izay manan-danja indrindra amin'ny fametrahana ny fiarovana manerantany sy ny fiantohana ny tambajotra.
Nanomboka tany Etazonia ny data momba ny Datam-panajana Daty manan-danja, Kanada tamin'ny volana Janoary 2008 ho fampivoarana ny fetin'ny fankalazana ny andro firaisana any Eorôpa. Ny fotoana iraisampirenena dia mandroso fahatsiarovan-tena amin'ny fahamendrehana sy ny fikarakarana data tsara indrindra. Fantatra amin'ny firenena Amerikana, Canada ary ny firenena 27 Eoropeana, ny fikarakarana ny Daty Daty momba ny Daty Daty dia ny mifantoka amin'ny fitarihana olana eo amin'ny mpanjifa sy ny fikambanan'ny marika fiarovana ny fiarovana ny Data ao amin'ny tranonkala. Nanjary zava-dehibe kokoa izany raha ny fifandraisana eo amin'ny olona no nitatra be nandritra ny taona maro noho ny fiarovan-tena.
Ny Data Privacy Day dia mety hampianatra sy hampiditra fikambanana, mpividy ary fianakaviana miaraka amin'ny fianarana sy ny fomba fanao tsara indrindra mba hisorohana tsara kokoa ny programmers, ny aretina sy ny malware izay mametraka ny angon-drakitra ho loza. Ny Daty nahaterahana Daty Daty dia manambatra ny olona amin'ny fanavaozana sy ny manampahefana ao amin'ny governemanta, ireo mpampianatra, ireo izay tafiditra miaraka amin'ireo asa amporisihan'ny mpiraki-draharaha sy ny mpisava lalana mifanandrina amin'ny sehatry ny indostria
Ka inona àry no azonao atao momba ny fiarovana an-tserasera? Amin'ny tsy fahafahana manitsy ny fiarovana ny Daty sy ny fiarovana anao, ny Daty Daty momba ny Daty Daty dia fotoana manokana hanombohana tsara ny fiarovana ny angon-drakitrao. Target, Sony ary Yahoo dia samy nandray ny fomba sarotra indrindra. Ny tombontsoa lehibe indrindra amin'ny orinasa tsirairay dia ny hampihatra ny fitantanana lehibe momba ny Data na izy ireo dia ny tantaran'ny fitarihana manaraka ao amin'ny CNN na ity singa goavana manaraka ity ao amin'ny The New York Times. Na inona na inona ny bankinao, ny manampahaizana manokana, ny fivarotana zava-mahadomelina na ny tontolo iainana miasa, dia manentana azy ireo mba hahazoana antoka ny Data avy aminao. Aza manaiky mihitsy fa ny data dia voaaro. Aoka ho mpisolovava anao manokana momba ny fiarovana.
Ny National Cyber ​​Security Alliance dia mandrindra ny fampandrosoana ny fampihetsiketsehana Daty Daty Daty. Ireto misy ampahany amin'ireo zavatra andrisihany hataontsika mba handrosoana ny Daty momba ny Daty tsy miankina:
Miangona izany. Mba hahazoana antoka ny Daty manokana, tsy mila matahotra ny tambajotra sosialy ianao. Tweet fiarovana fiarovana. Hafatra hafatra ao amin'ny kaontinao Facebook sy LinkedIn. Azonao ampiasaina ny tenifototra ofisialy momba ny Datafom-pahavelomana Daty Daty Daty, ary maka aorian'ny @DataPrivacyDay mba hijanona ho fomba iray amin'ny ankamaroan'ny toro-hevitra farany momba ny Daty Daty momba ny Privacy ianao mba hanomezana ireo fikambanana sy mpanolotra anao.
Ataovy hoe ofisialy izany. Azonao atao ny manoro hevitra ny fikambananareo hampiseho ny fanohanany ny Andro maivana amin'ny Daty Daty amin'ny alàlan'ny famoahana ho an'ny Champion ofisialy ofisialy ofisialy. Herintaona lasa izay, mihoatra ny fikambanana 450 no nirotsaka ho Tompon-daka Daty Daty Daty nahaterahana. Maivana sy tsotra ny miditra.
Ataovy tsirairay izany. Ny fiarovana ny fiantohana dia manomboka ao an-trano, koa azafady mba hahafantaran'ireo namanao sy fianakavianao ny loza ateraky ny angon-drakiny manokana, indrindra fa ireo ankizy sy tanora izay mety handalo amin'ny alalan'ny fantsom-pifandraisana amin'ny tranonkala. Arovy ny angon-drakitrao momba ny tsy fahafahana manana rakitra mifandraika amin'ny solosainao, tablette na televiziona malemy izay mifandray amin'ny fampahalalam-baovao interactive toy ny Netflix, Hulu, Amazon Prime ary iTunes.